तपाइहरुको प्रयास सर्हानिय लाग्यो। ब्लग खोल्नु मात्रै भन्दा खोलेर केही गरे देशले पक्कै केही पाउनेछ। एक आपसमा सुचना आदान प्रदान गर्न तपाइहरुले बनाएको नेपाली ब्लगर निकै प्रशंसा योग्य छ।
म संस्था खोल्नै हुन्न भनेर भनी हाल्न त चाहन्न, तर किन खोल्नु पर्छ भन्ने कुराको भने केही चित्त बुझ्दो उत्तर भने कतै बाट पाएको पनि छैन । कसैले तर्किक रुपमा त्यसको फाईदा देखाउन सके सयद मन बद्लिन्छ पनि होला । I am more than happy with the Google Group for now. आफ्नो काम सकेर, परिवारबाट समय निकालेर ब्लग लेख्नु नै एक ठुलो कुरो हो । सुरुको जोस बाहेको, कोही संस्थाको पछी लागेर बस्न सक्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । बरु तेही ईमेल ग्रुपलाई बरु कसरी बैज्ञानीक र सान्धर्भिक बनाउंदै लैजाने मा प्रथमिकता दिए रामो होला जस्तो लाग्छ मलाई ।
In my opinion, justagoogle group is enough to be in touch and better communicate at least for now.
अहँ छैन ।
अब सभापति मलाई नै दिने भये र काम जती अरुले गर्ने भये खोले पनि हुन्छ
ईमेल समुह र पछि चाहीएमा छूट्टै ब्लग बनाउँदा नै सबैकुरा गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई पनि ।
त्यो भन्दा बढी वा संघ, संघठन खोल्नेमा मेरो पनि रुची छैन ।
मलाई पनि यही नै ठिक जस्तो लाग्छ ।
दौतरी ज्यू मलाई तपाइको ब्लगको ब्यानर कोड उपलब्ध गराएमा आभारी हुने थिए ।
सुर्य जी तपाइले दौंतरी ब्यानर कोड माग्नुभएको हो की नेपाली ब्लगरब्यानरको कोड?
यो हो दौंतरी ब्यानर कोड
>a style="display: block" href="http://www.dautari.org"<
>img width="178" alt="dautari add" src="http://www.arvaonline.com/dautarimainlogo.gif" height="64"/<
यो हो नेपाली ब्लगर ब्यानरको कोड
कमेन्ट बक्समा कोड राख्न समस्या हुने रहेछ। त्यसैले कोड थोरै बिगारेर राखेकोक छु। माथीको कोडमा ">" लाइ "<" लाइ "<" र लाइ" >" बनाउनुहोला।
मैले चाहिँ प्रज्वलजीको बिचारमा सहि थपेँ...
कमेण्टकोलागि सबैमा धन्यबाद ।
प्रज्वलजीमा विशेष आभार,
मेरो आशय पनि भौतिक रुपमा अस्तित्व रहने गरी संस्था खुल्नै हुन्न भन्ने चाही हैन है ! (यो कुरा सायद पोष्टमा क्लिएर छैन)।
तर संसारभर छरीएर रहेका ब्लगरहरुलाई एकै छातामुनि राख्‍न भने साइबर स्पेसमै रहनुको विकल्प छैन जस्तो लाग्छ ।
अहिलेको अवस्थामा 'संस्था' खोल्नुभन्दा त्यहि गुगल समूहलाई प्रभावकारी बनाउँदा राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई । मैले बारम्बार भन्दै आएको छु यस अघिका टाँसोहरुमा, कि ब्लगगानजस्तो बिचमै हराएर यो समूह स्वर्गे नहोस् ।
हामीजस्ता नव प्रवेशी ब्लगरहरु हरेक कुरामा कमजोर छौं । यसबाट हामीले निकै ठूलो फाइदा उठाउन सक्छौं जस्तो लाग्छ मलाई । चाहिँ त्यो प्राबिधिक होस् या अन्य कुनै विषय । सबैको सहयोग र समर्थन चाहिन्छ, भविष्य दुर छैन ।
But, I did know about this only after the meeting was over. I wish to join this forum though there is not much continuity that i am able to give to my blog. Wish You all, all the best!
ब्लगर भेला गर्ने भनेर कुरा उठे देखी आजको दिनसम्म मेरो आफ्नो अनुभव भन्दा प्राय ब्लगरसंग निकै कम समय छ र त्यही कम समय ब्लगमा बिताउने गर्छन। संगठनको प्रारुप जस्तो भए पनि ब्लगरहरुको संगठन बनाउनु राम्रै कुरा हो। त्यसले ब्लगहरुलाइ एउटा स्थानमा मिलाउंछ। तर ब्लग भेलामै आउन हम्मे हम्मे पर्ने साथीहरु थुप्रै भएकोले संगठनमा समय कसरी दिनुहुन्छ त्यो भने सोच्नैपर्छ। फेरी संसारै भरी सबै महादेशमा छरिएका ब्लगरहरुलाइ कसरी संगठित गराउने?
नेपाली ब्लगर इमेल समूह हो । तर यस्लाइ एउटा संगठन मान्दा पनि हुन्छ। अथवा ठरकी सरले भने जस्तै यस्लाइ एउटा "छाता संयन्त्र" ठाने पनि हुन्छ। आफ्नो फुर्सत अनुसार समय दिने र एकआपसमा सहयोग गर्ने काम नेपाली ब्लगर समुहबाट नहुने कुरा म देख्दिन। यस्ता कार्यको लागी अधक्ष या सचिब नै चाहिन्छ भन्ने लाग्दैन। नेपाली ब्लगरहरुको अहिलेको आबश्यक्ता पनि त्यही भएकाले बर्तमान समयमा नेपाली ब्लगर समुह नै उपयुक्त छ। अब केही ब्लगर नजिक भए त्यां भेटघाट या अन्य समुह बनाउन नसकिने त कुरै छैन। त्यसको लागी नेपाली ब्लगर्स बाधक बन्ने कुरै आउदैन।
अहिले यही समुहमा कुरा गर्दै जाऔं, समय अनुसार जे गर्नुपर्छ त्यही गरौंला।